Uhlobo lomkhiqizo wase China hose clamp Umkhiqizi kanye namafektri | IGlorex
Uhlobo lwe-hose clamp yaseJalimane
Izinhlobo zaseGerman hose clamp zine-9mm ne-12mm bandwidth, iTooth clasp phakathi.
Indandatho engagcwalisiwe yohlobo lwe-hose clan yaseJalimane iqinisekisa ukuthi i-silicone hose ethambile ayichotshoziwe noma ayisikiwe ngesikhathi sokufakwa kanye nokufakwa kokugcina kwethoshi, ngenkathi igcina ubuqotho bokuxhuma nokunikeza uphawu oluzinze ngokwengeziwe, ngokuhambisana ne-DIN3017.
Ukuhlanganiswa okujwayelekile kuyisikhwama sepulasitiki, kanti ibhokisi elingaphandle liyibhokisi.Kukhona ilebula ebhokisini.Sokufakelwa okukhethekile (ibhokisi elimhlophe elicwengekile, ibhokisi le-kraft, ibhokisi lombala, ibhokisi lepulasitiki, ibhokisi lamathuluzi, i-blister, njll.)
Izinhlobo zama-hose clamps zaseJalimane zisetshenziswa kabanzi kulezi: izimboni zezimoto, izimboni nezasolwandle.
Uhlobo lwe-hose clamp yaseJalimane luqinile futhi luqinile. Izikhala ezingekho emaceleni zinomphumela wokuvikela kwi-hose. Idizayini ye-convex ne-concave ngaphakathi ingumphumela omuhle wokulungisa ku-hose, engavimbela i-hose ukuthi iwe noma iwele emuva.
ama-PC / isikhwama
Esedlule: Iphampu ye-hose ephindwe kabili
Olandelayo: Uhlobo lwaseJalimane lwe-hose clamp ngesibambo
Uhlobo lwe-hose clamp yaseJalimane ngaphandle kokufaka izintambo (nge-s ...
Uhlobo lwaseJalimane lwe-hose clamp ngesibambo
Uhlobo lwaseJalimane lwe-hose clamp ngaphandle kokufaka izintambo